Dealer Signature Tracker: iyo roulette mutengesi inoteedzera software!
Ruoko rwemutengesi rwunokanganisa chaizvo nhamba inokunda mu roulette? Kana ikasanyatso kukanganisa mhedzisiro, saka nei mutengesi achichinja yega maminetsi makumi matatu kana zvakadaro muhupenyu online roulette? Tsvaga ne Dealer Signature Tracker!
Nhanganyaya ku Dealer Signature Tracker
Chii ichi Dealer Signature Tracker? Iyo roulette mutambo chishandiso iyo inokutendera iwe kuteedzera uye kuongorora iyo croupier's rolls kubva kune iyo geometric maonero.
Chaizvoizvo neichi chekutanga tracker iwe unozogona kufungidzira kusingaperi kusingachasarudzike chete kubva kunhamba yenhamba yekutarisa (kunonoka, mafiringi, nezvimwewo), asi pane pasi pechiratidzo chitsva chekuona, chakabatana nekugadzirwa kwemajometri maitiro.
Usati waenderera mberi nekuverenga ndinokurudzira kuti usatambe ma software roulettes, sezvo achigona kuyerwa kuti mutambi arasikirwe anopfuura 2,7% emutero unotarisirwa kune chaiyo roulette.
Iwo madaro pane roulette
Pfungwa yepakutanga iyi nzira yakadzokera kune imwe nzira iyo ini ndakaverenga kare kare pane iyo laroulette.it saiti, uko mutambi, pasi pezita rekunyepedzera reGimbo, akatsanangura nzira yake yekutamba: nhamba yega yega inoenderana nechinzvimbo pa roulette isingateveri. kurongeka kunonzwisisika, kutanga kubva pa zero, kuenda kurudyi tinowana nhamba 32 pachinzvimbo 1, 15 pachinzvimbo 2 zvichingodaro kusvika pa26 pachinzvimbo 36.
Zvakare, kana isu tichiverenga iyo nhamba yezvinzvimbo tichitarisa wachi, isu tine iyo 26 iri muchinzvimbo 1 uye 32 muchinzvimbo (chinhambwe) 36.
Iyo nharaunda iri pakati pemaviri roulette manhamba saka ndiwo mhedzisiro yekuverenga iyo nhamba yemabhokisi anovaparadzanisa.
Iyi nhanho inogona kubva pa0 (kana ikabuda kaviri kana kupfuura zvakapetwa nhamba yakafanana), inosvika pamakumi matatu neshanu.
Iwo mapoka mu Dealer Signature Tracker
Iko hakuna matanhatu, gumi nemaviri kana mamwe mabatanidzwa, iyo chete kukosha kukosha ndiko kureba.
Iwo marefu akaverengwa mumapoka enhamba nhanhatu dzinoteedzana pane vhiri rakakamurwa seinotevera:
Boka +1: madaro kubva 1 kusvika 6
Boka +2: madaro kubva 7 kusvika 12
Boka +3: madaro kubva 13 kusvika 18
Boka -1: madaro kubva 19 kusvika 24
Boka -2: madaro kubva 25 kusvika 30
Boka -3: madaro kubva 31 kusvika 36
Iyo nzvimbo 0 (kana nhamba iyo ichangobva kudzokororwa ikadzokororwa) yaizowirirana neboka 0, iro, zvisinei, riri kuumbwa mukuita neumwe chete, raisazofananidzwa nemapoka apfuura.
Chinzvimbo chemapoka pane madaro hachina kugadziriswa, asi chinotenderera pahwaro hwenhamba yekupedzisira yakapihwa, uyezve mhedzisiro yenzvimbo yacho pane humburumbira haina kutariswa, asi boka rinoenderana nedaro riri pakati penhamba mbiri.
Kuti usarudze nemazvo boka zvinodikanwa kuti uverenge chinzvimbo ichienderana nechero spin, mashandiro anozoitwa nesoftware iri nani yakatsanangurwa gare gare.
Girafu iri mu Dealer Signature Tracker
Kupatsanurwa kwematanho kuenda mune zvakanaka uye zvisina kunaka kunotibatsira zvakanyanya muchikamu chemifananidzo inomiririra yekugara, muchokwadi, tichishandisa iyo yakasarudzika maviri-mativi XY girafu, tichava neiyo iyo abscissa (X axis) inomiririra akasiyana akasiyana ( spin) uye iyo yakagadzirirwa (Y axis) mapoka akasiyana.
Kuronga girafu yematanho panguva ino inova yakapusa chaizvo: pane yega yega kutenderera boka rinoenderana rinotsvaga paY axis uye kubuda kunoiswa chiratidzo.
Iwe unogona ipapo kujoina iwo akasiyana mapoinzi netambo uye isu tobva tazowana graphical inomiririra yemafambiro ematanho echikamu chemutengesi watiri kuongorora.
Chikamu chega chega chakatariswa zvakatemwa uye kuri kuongorora magirafu akagadzirwa kuti iwe ugone kuyedza kuadudzira, kana kuyedza kutsvaga mapatani, zano rinozoratidzwa zviri nani gare gare, ndiwo mamiriro kana maitiro neimwe nzira anozivikanwa kushandisa nekuisa kutamba.
Uchishandisa Dealer Signature Tracker
Kana kodhi yekuvhura yapinda, iwo maviri 'Nyore' uye 'Pro' mabhatani ari muchirongwa anotanga hwindo anozoshandisa.
Yakareruka vhezheni: iyi ndiyo vhezheni yechirongwa icho chinoshandiswa chete girafu rekutevera rinoshandiswa, mukuita zvese wachi nekutenderera kwewachivande kunoonekwa seyechete anomiririrwa.
Pro vhezheni: ndiyo vhezheni ine girafu mbiri, imwe yewatch spins uye imwe yeiyo inopesana nemawachi, ine manhamba uye otomatiki kusevha.
Maitiro akawandisa ekushandisa iyo Pro vhezheni ese akatsanangurwa gare gare muchikamu che'DSTracker Method '.
Dealer Signature Tracker Yakareruka vhezheni
Sezvatotaurwa, kushandiswa kwechirongwa kuri nyore uye kujeka, zvisinei, runyorwa rweakakosha mabasa nderekufanirwa: kutanga kwezvose, ingo fambisa mbeva mbeva pamusoro pekiyi imwe chete yechirongwa kuti uone tsananguro pfupi yezvinoenderana basa rinoonekwa.
Pakutanga chete kwechikamu chedu chemutambo ndipo patinofanirwa kuisa yekupedzisira maviri manhamba mumabhokisi e'Kutanga 2 Spins ', wobva wangopinza iyo nhamba ichangopinda mupaneru rekutanga kumusoro uye zvichienderana nekutungamira kwekutanga (CW = Clockwise CC = Kurwisana nemawoko) einotevera spin, tinya pane 'CW' kana 'CC'.
Mushure mekuvhurwa kwega kwega saka zvinodikanwa kuisa iyo nhamba mune repaneru repamusoro uye tinya pane 'rekodhi'.
Kubva ikozvino zvichienda chichava chirongwa otomatiki kuchinja kubva kuCW kuenda kuCC uye isu tinongofanirwa kuisa yekupedzisira nyaya yakaburitswa mupaneru uye tinya pane rejista bhatani.
Nekudzvanya pabhatani rekodhi, mune 'Yekupedzisira #' pani iyo nhamba yakaburitswa ichaiswa otomatiki (kana paita chikanganiso zvicharamba zvichikwanisika kushandura manhamba nhamba) uye nekudaro isu tinongofanirwa kubaya pane panhare mufambo kusarudza daro ratiri kuda kunanga uye tinya bhatani Ratidza Kubheja Manhamba (inoratidza manhamba ekubheja).
Nekudzvanya pane bhatani negirazi rinokudza, tichakwanisawo kuona kuti nhamba idzi dzakarongwa pavhiri, kuti tikwanise kutevedzera kuburuka kwebhora mubhokisi rinokunda.
Kuti girafu rioneke zvakare, tinya chete pairi roulette vhiri, iro rinobva rangonyangarika.
Iri ndiro chati redare rakagadzirwa neCroupier, ramba uchifunga kuti mune iri nyore vhezheni poindi imwe neimwe inomiririra zvakatenderedza wachi uye anticlockwise spin
Kurudyi kwegrafu iwe iwe yaunowana, kutanga kubva kumusoro:
runyorwa rwematanho rwakafamba nechikepe;
huwandu hwenzendo dzakanyorwa (spins) panguva yechirongwa, zvinoenderanawo nenhamba yemapoinzi pagirafu.
Ikozve kune bhatani (iyo tsvuku X) yekudzima chete yekupedzisira poindi / daro rakapinda, kana pachinzvimbo iwe uchida kudzima semuenzaniso iwo gumi ekutanga madaro akapinda, ingo peta-peta pairi daro rekutanga mune runyorwa uye dzokorora mashandiro. nguva zhinji sezvaunoda.
Chekupedzisira, kumberi pasi iwe unowana yekufambisa miseve kuti utarise iwo mapeji egirafu ayo anogona kuve neinosvika makumi maviri nemashanu poindi pane peji.
Chete mune Rakareruka vhezheni, nekuda kweyechipiri girafu iri kumberi pasi, zvinokwanisika kurodha uye kuenzanisa chikamu chakambochengetedzwa (zviri pachena naCroupier iye amene), kuti utsvage zvinogona kufanana.
Iyi girafu yechipiri saka zvekubvunza chete, saka iwe unozongokwanisa kupuruzira mapeji kuenda kumberi / kumashure.
kanzuru: kana iwe uine akati wandei zvikamu zveiyo imwechete Croupier, gadzira faira rimwe chete (ingo teedzera / unama mafaera akasiana-siyana) woishandisa muchirongwa nekupururudza mapeji kuti uwane iripedyo zvinoonekwa kuchikamu chazvino.
Chekupedzisira, sekugona kunzwisiswa zviri nyore, mabhatani aya anoshandiswa kuitira:
ratidza / viga iyo Statistics pani uye musangano chikamu;
chinja kune iyo Pro vhezheni yekutarisa;
bvisa rese data (madaro uye girafu) yechirongwa chiripo.
Session Management (Nyore)
Session manejimendi yakakamurwa kuita: Chino Chino (chikamu chiri kuenderera) e Saved Session (chikamu chakachengetedzwa).
Chino Chino: mabhatani anoshandiswa kurongedza chikamu chakachengetedzwa, kuichengeta uye kuchengetedza mufananidzo wegrafu kuti ubvunze mune ramangwana.
Masangano ese akachengetwa mumafaira ezvinyorwa (txt) inogadziriswa chero chirongwa.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuisa ese ari maviri zita renzvimbo yatinotamba, uye zita reCroupier, iyo ichave iri yese iri muzita refaira ratino chengeta / kutakura mukuwedzera kune iro zuva / nguva iyo chirongwa chinoona. kubva panguva yePC yedu.
Saved Session: kuti ubvunze girafu yapfuura / chikamu cheiyo imwechete Croupier yatiri kuronga, zvinokwanisika kurodha chikamu chakachengetedzwa, icho chinoratidzwa mugirafu pazasi sezvataona kare.
Ini ndinokuyeuchidza kuti iyi sarudzo inongowanikwa muiyo Easy vhezheni, senge muPro vhezheni, sezvauchazoona, chikamu chepazasi chechirongwa chinogarwa necount-clockwise Spin chati, uchiri pano, sezvaunoziva, mune imwe chete chati isu tese tiri vaviri paawa uye inopesana nemaawa anotenderera.
Statistics Panel (Nyore)
Muiyo Rakareruka vhezheni, chete akajairwa manhamba anopiwa, i.e. iyo frequency (inoratidzwa zvese muchiverengero uye muzana mazwi), kunonoka ikozvino (Kunonoka), kunonoka kwakanyanya (MAXD) uye iyo CI
CI = inyore index.
Iyo yekureruka indekisi inhamba inoverengeka inomiririra kuwanda kwechiitiko chechiitiko uye inoverengwa nefomula inoshandisa kuwanda kwechiitiko uye kunonoka kwayo kwazvino.
Iyo yakakwira iyo yekureruka indekisi kupfuura 1, ingangoita mukana wekutevera unotevera.
Kana iyo CI ikava yakakura kupfuura kana yakaenzana ne1, iyo ruvara rwenzvimbo inoenderana inochinja kuita tsvuku kuratidza mukana wakakura wekubuda.
CI paramende nhamba chete, ichi chiratidzo chinofanira kushandiswa chete kana usina chokwadi nezvekuti ndeipi nhanho yekutarisa, mune ino CI yakakura kupfuura imwe nhanho ichienzaniswa neimwe, ichatibatsira kukurumidza kukunda chero kusagadzikana.
Iwo manhamba ari pachena ane hanya zvese zviri zviviri chikamu chiripo (chepamusoro chikamu) uye chakachengetwa (chakadzika) icho chiri pachena chinozoratidzwa chete kana takatakura faira rakambochengetedzwa.
Dealer Signature Tracker Pro vhezheni
Iyo Pro vhezheni yechirongwa ndiyo yekushandisa kana iwe uchida kuisa dzimwe nzira dzinotsanangurwa muchitsauko chakakodzera (DSTracker Method) icho chauchazowana gare gare.
Iyi vhezheni inosiyana chete zvishoma kubva kuiyo Easy vhezheni, saka kana, sekuvimba kwangu, iwe watoita bvunzo neiyo Easy vhezheni, kuchinjira kuPro vhezheni iri nyore kwazvo.
Ngatione misiyano mikuru nekukasira. iwe unofanirwa kudzvanya pane bhatani pano futi rekodhi.
Musiyano watinozoona ipapo ndewekuti uchienzaniswa neiyo Nyore, muPro vhezheni nzvimbo yekunyoresa kure ichaiswa kune yega yega mairafu maviri aripo.
Mukudzidzira isu tichava nemagirafu maviri akapatsanurwa, imwe chete yekutenderera kwewashi uye imwe yeiyo inopesana nemawachi.
Icho chikonzero cheichi chiri pachena chinotsanangurwa gare gare muchitsauko pane iyo DSTracker Nzira.
Iyi pani iri zvakare yakafanana uye ine mashandiro akafanana neayo eiyo Easy vhezheni, mutsauko chete ndewekuti pano, kuwedzera kune manhamba anoenderana nedaro rekubheja, isu tinewo (ipapo pazasi) nhamba nhanhatu dziri dze yakatarisana nechero vhiri pane vhiri, kana chero munhu achida kuyedza nzira nyowani kana kuyedza nzira nyowani dzekubheja.
Tichirangarira kuti ingo mhanyisa mbeva mbeva pamusoro pebhatani rega kuti uone tsananguro pfupi yekuenderana kunoenderana, ngatione mashandisirwo emabhatani aya anotangira kumusoro: iwo mapfundo maviri (asipo muiyo Easy vhezheni) anotendera iwe kuti uvhare kuiswa kwe iwo mapoinzi ari mugirafu kungoenderana newachi kana kungopesana neiwachi chete.
Mukudzidzira mune mamwe masaiti maCroupiers ivo vanogara vachitenderedza vhiri munzira imwechete uye nebasa iri tinogona kushandisa nyore nyore rimwe chete remagirafu maviri, nekuti zvikasadaro chirongwa chaizoisa poindi yegirafu yega yega.
Iwo mamwe mabhatani, maererano nechitarisiko, akafanana neakaonekwa kare muiyo Easy vhezheni, anoti: ratidzira / viga manhamba, chinja (dzoka) kuiyo Easy vhezheni uye (X) bvisa rese data reiyo yazvino musangano.
Iyi pani inokutendera iwe kurodha uye chengetedza zvikamu zveayo maviri mairafu.
Ini ndinokuyeuchidza kuti pano hatigone kurodha (senge muRuzivo vhezheni) zvikamu zvakachengetedzwa kuti uzvienzanise neyazvino, sezvazviri muPro vhezheni iyo Croupier inoteedzerwa pasina kufunga nezvezvikamu zvakapfuura.
Zvinonunurwa zvinoitwa nechinangwa chega chekuzotevera kudzidza kwegirafu uye kunzwisisa chero zvikanganiso zvakaitwa mukuziva iwo manhamba.
Nekiyi Otomatiki Savings zvinokwanisika kumisikidza otomatiki kuponesa ese ari maviri mairafu uye neawa uye anticlockwise chikamu.
Muchokwadi, ingosarudza dhairekodhi (kana iwe uine Windows 7 kana yepamusoro zviri nani kuigadzira pane desktop) uye sarudza maminetsi mangani ekuchengetedza; chirongwa ichi chakanangana nezvikwekwe zvezvaunoda kuchengetedza, ichaita basa rayo otomatiki pane yega yega nguva yekumisikidza, mukana wakakura!
Zviripachena, zvakare pano (kubva padanho repamberi) iwe unogona kuisa zita rekasino uye Croupier iyo, sezviri muiyo Easy vhezheni, ichaiswa muzita refaira rakachengetedzwa neyakaenderana zuva uye nguva yechirongwa chakatambwa.
Statistics Panel (Pro)
Mune ino pani ye Dealer Signature Tracker isu tinowana ese echinyakare manhamba: mafambiro, ikozvino kunonoka uye kunonoka kunonoka uye iyo CI yatotsanangurwa pamusoro.
Aya maverengero anoenderana nechikamu chiripo uye akapatsanurwa kuita mawoko nemawoko anopesana nemawoko.
Pamusoro pehuwandu hwehuwandu, mune iyo Pro vhezheni kune zvakare, mune rinotevera pani, iyo manhamba e 'Kureba'.
Chii chinorehwa ne 'Kureba'? Kureba ndiyo nhamba iri pakati penzvimbo imwe uye inotevera yegirafu rimwe nerimwe.
Kufunga kuti madaro acho matanhatu (+ 3 + 2 + 1-1-2-3) uye tichifunga kuti kana nhambwe ikadzokororwa kureba kuri 0, tine izvo kuti kana -3 yauya iyo -1 takwira nemaviri zvinzvimbo (kureba) uye kana mushure mokunge matatu auya iyo -3 Takadonha nehurefu hushanu.
Kana kana mushure mokunge iyo -1 yauya iyo +2 isu takwira nehurefu huviri.
Mukuita, nhamba iyi inobvumidza iwe kuteedzera chero mafambiro eimwe Croupier kuti unzwisise kana iye 'akasarudza' kumhara madaro.
Kuongorora chimiro chakapfuura, semuenzaniso, ndinogona kukurumidza kufunga kuti Croupier yakatariswa ine sarudzo yehurefu -1, 0 uye -2 mumatanho emaawa uye sarudzo yehurefu -1, 0 na -2 mune dzemawere .
Iyo DSTracker Maitiro
Ini handitendi mune zvekuti nenzira iyi zvinokwanisika kutsvaga ruoko rwe croupier 'sainzi', uyezve ndinojekesa kuti iyi nzira yekutamba, sezvo pasina kubhejera mushure mekukandwa kwebhora, haina chekuita neicho chaicho panyama nzira / ballistics, asi nekungotamba zvikamu, isu tiri kuendesa maitiro edu kumutambo kubva kumunda weiyo chaiyo masvomhu, kune iyo yejometri inomiririra yekusingaperi, pasina iyi shanduro ichitipa chero chakakura masvomhu mukana pamusoro pebhenji.
Iyo nzira nyowani
Mashoko aripi ipapo? Sei tichifanira kutora nzira iyi chaiyo kumutambo? Zvakanaka, ini ndinotanga nezvidiki-diki: kutanga kwese kubva kuongororo yangu iripedyo, mukufamba kwenguva Croupier inogadzira madaro ese matanhatu (+3 +2 +1 -1 -2 -3) mune inenge yunifomu nhamba, saka hauzocherechedze (sezvazvinogona kuitika nenzira yemuviri) kutsauka kwakakosha kubva payakajairika muzana mukana wekubuda kwenhamba nhanhatu kubva pa6 (inenge 37%); chechipiri, maburi uye kunonoka zvichave (zvinogara zviri mukureba kwenguva), zvinowirirana neizvo zvemasisitini echinyakare atakajaira kutamba, saka mumaonero angu zvese zviverengero zvinogona kuyerwa nechirongwa, zvinogona kubatsira mumwe munhu kune avo dzimwe pfungwa nyowani dzinogona kuuya, ndadzibatanidza nekuti dzakakumbirwa kwandiri muchikamu chekuronga, asi mumaonero angu havazopa (ndinotarisira kuti ndakanganisa) chero chinoratidza chiratidzo chehwina nzira nguva refu.
Iko kugona chaiko kweiyi nzira yemutambo, kune rimwe divi, inoratidzwa mune imwechete uye yakasarudzika chikamu.
Mukuita, nekucherechedza mairafu mushure memazana mashoma ekuruka, iwe unogona kuona madiki maitirwo kana mapatani madiki ayo roulette (kana iyo Croupier) inochengetedza kwenguva yakati rebei, asi dzimwe nguva inokwana kurwisa kunobatsira.
Ini ndinofunga zvakakosha kuti chirongwa ichi chionekwe kwete senzira yekumira yemutambo, asi seyakagara yakavhurika rabhoritari yemazano, uko chero munhu anogona kupa neruzivo rwutsva rwemawaniro akanaka uye ari nani mhedzisiro.
Iye zvino zvawakadzidza mashandisiro echirongwa ichi, ngatifambei tichiongorora zvimwe zvinogona kunyorera, chimwe chazvo kunyanya, chakanyora mhedzisiro inonakidza.
Maitiro # 1: Kudzingirira zero
Iyo zero daro inoitika kana nhamba ichidzokororwa uye nesarudzo yakakodzera yechirongwa, asi pamusoro pezvose kuitira kuti isagadzirise kuratidzwa kwegirafu inogadzirwa nekugara, daro iri harina kunyorwa nechirongwa, asi kana kudzokororwa kwe nhamba inobuda, inoonekwa seyakarasika pfuti uye chikamu chimwe chete chinodzokororwa.
Nekudaro, iyo zero yandiri kutaura nezvayo haisi iyi, asi iyo yakaburitswa neiyo algebraic sum yemadhizaini sezvaanowedzerwa mukusingaperi.
Ini ndinokuyeuchidza kuti nenzira iyi pese paunonongedzera pane imwe nhanho, kazhinji nguva dzose nhamba yenhamba nhanhatu dzakasiyana dzinoenderana, saka kana iwe ukanongedzera chinhambwe - katatu katatu mumutsara, nhamba dzinenge dzichingogara dzakasiyana, nekuti ivo dzakabatanidzwa.nhamba yakambobudiswa.
Izvi zvinoreva kuti pane zviripo zvipenga izvo zvine chisimba zvakanyanya maererano nekuwanda kwematanho akasiyana uye pamusoro pezvese zvakaenzana, kuva muchiitiko nguva dzose kwairemekedza kodzero yekubuda kwechero chikamu uye kuve iyo algebraic sum yakaenzana zero (3 + 2 + 1-3-2-1 = 0), tichaenda kunovhima zero zero pamusoro pematanho matatu.
Ngatitorei muenzaniso nekukasira:
Chaizvoizvo spins yakanyoreswa pahupenyu roulette pane yepamhepo kasino.
Iyi nzira muchidimbu, inosanganisira kutamba zero zero (kana zvichibvira) mushure mekunge marefu maviri abuda.
Mugirafu riri pamusoro, iwe uchaona kuti danga rekutanga kubuda rakanga riri +3, richiteverwa na -1, kuti tiwane zero huwandu, taizofanira kubheja padaro -2 se + 3-1-2 = 0.
Pakarepo mushure mekunge tange tamirira mamwe madaro maviri uye tabuda pa -2 ne +1, kuti tiwane zero zero, tichava nekubheja pane chinhambwe +1, se -2 + 1 = 1.
Pakarepo mushure menguva daro -3 richabuda kaviri mumutsara, saka hatina kuzobheja chero chinhu, uyezvezve gare gare, sekuteedzana -3 -2, hatina chinhambwe + 5 chinangwa.
Muchikamu chemuenzaniso uyu mutengesi anotisiira nemari inoshanda yezvidimbu makumi matanhatu (60 + 36 -36 zvidimbu zvemabheti maviri).
Zviripachena kukuita kuti unzwisise nzira yacho zvakanaka ini ndatora nzira inoteedzana, asi ini ndinokuvimbisa iwe kuti chiitiko mune mapfupi macircuit (uye chikamu cheimwe croupier iri) chinowanzoita zvakakwana kuti ufare pasina zvinonetsa zvakawanda.
Ini handizotaure zvakawanda pamusoro peiyi nzira yekutanga nekuti iri nyore uye ndisati ndairidza ini ndinokukoka kuti uite bvunzo dzakawanda.
Maitiro # 2: Hunt yeiyo micro pateni
Ichi chechipiri chishandiso chechirongwa chinosanganisira kutsvaga kweanodaidzwa kunzi 'madiki mapatani'.
Muenzaniso mune yedu chimiro, pateni kana pateni yakatsanangurwa, saka chinangwa chemusiyano uyu kuziva uye kubheja pane kudzokorora kwevamwe hunhu neiyo roulette (kana iyo croupier).
Ngatitorei kuona girafu inogadzirwa nemutengesi panguva chaiyo yemutambo musangano pane online kasino.
Zviripachena ziso risina ruzivo rinogona kusakwanisa kuona chaizvo zvandinoona:
pa4 zvakapetwa chinhambwe -2 chakabuda, katatu pakarepo mushure mechinhambwe -1 chakabuda, kubva ka5 kakapetwa nhambwe -3 chakabuda, katatu chakabuda pakarepo mushure meiyo -2 nzvimbo. Kunakidza handiti?
Rangarira chinhu chimwe chakakosha: izvi zvinongoshanda kune imwechete Croupier chikamu chatiri kuteedzera panguva iyoyo chaiyo.
Mukufamba kwenguva iyo Croupier (kana iro vhiri) ichaburitsa zvakateedzana zvakafanotaurwa padanho rehuwandu, saka kuunganidza mazana ezvipenga zveiyo yakapihwa Croupier uyezve kutsvaga chero kutsauka kwakawanda (kudziya kana kutonhora madaro) hakunzwisisike, unogona kuita kurovedza muviri kwakanaka, asi usatarisira kuwana croupier ine ruoko rwakaremara (ruoko rwakarerekera), sezvo machira acho asipo netsaona uye zvakajairika kuti ndozvazviri.
Ini handiende mukukodzera kweiyo nzira yekushandisa mari yekutora nemaitiro aya, ini pachangu ndinoda kutamba nemari yebhangi, saka kutanga kubva pazishoma petafura ini ndaizotamba kufambira mberi kunokwira kusvika kumavanga maviri uye ini ndaizo zvishoma nezvishoma wedzera kukosha kwechimwe chidimbu.
Ini ndinofunga nzira yacho iri nyore, asi zvakadaro zvakakosha kuti ziso rishandiswe kuona pakarepo 'micro pateni' (micro nekuti inongova nemapoinzi maviri chete), kuitira kuti usarasikirwe kana imwe yeanogona iwo chikamu chimwe nechimwe zvinogara zvichipa.
Pakupera kwekutsanangurwa kweiyi yechipiri nzira, heino imwe girafu (inogara iri yechikamu chaicho chechokwadi) ine humbowo mumatenderedzwa eruvara izvo zvandinotsanangudza micro pateni: iwo iwo iwo mavara pachena anoenderana nechikamu chimwe chete (pateni).
Maitiro # 3: Complex Symmetries
Izvi zvinotevera mumaonero angu kushandiswa kwakanakisa kwechirongwa.
Zvirinani nekuti ndiyo inobvumidza, kana iyo Croupier iriyo chaiyo, kuva nezvakawanda purofiti paunenge uchienda kunovhima katatu kuhwina kwepfuti mumutsara nekubheja zvekare zvese pane inotevera pfuti.
Ramba uchifunga kuti kuhwina katatu akateedzana kurova kunoreva kuhwina 3 mayuniti (iwe unobheja 1.296-1-6 mauniti panhamba yega yega) uine purofiti kakapetwa ka36 kekutanga kubheja, zvakafanana nekupinda mukasino ne215 euros uchisiya ne 100!
Zvakanaka, hazvisi nyore, asi sezvatichaona gare gare izvi zvakasiyana zvichipa mukana wekuhwina zvechokwadi, zvinofanirwa kushandiswa zvine mwero: zvakafanana nekutasva bhasikoro rekumhanya nguva dzose uchirovera chete sikuta imwe, kunze kwekufara kwekutanga, hongu.inogona kukuvadza chaizvo!
Ok ini ndanga ndisingade kukutyisidzira, ingori kukoka kwakakomba kuti uchenjere, nekuti, sezvauchazvionera wega, apa unogona kukuvadza zvakanyanya kumakasino.
Iyo nzira ndeiyi: zvakaenzana magirafu zvikamu zvinotsvakwa, mukutsvaga 'macro pateni', saka hazvichisiri senge nzira yapfuura, zvikamu zve2 chete mapoinzi (micro), asi akareba anodzokorora mapatani anotsvakwa.
Usati waona mamwe mairafu, zvisinei, zvakanaka kukwesha pane zvinorehwa nekuenzanisa mugeometry: kune mhando mbiri dzekuenzanisa, axial symmetry uye yepakati symmetry.
Yekutanga ine chekuita netambo yakatwasuka, inonzi axis ye symmetry, yechipiri zvine chekuita nepo poindi, inonzi iyo nzvimbo ye symmetry.
Unoziva sei chiyero chakaenzana zvine chekuita netambo kana poindi?
Axis of symmetry tambo yakatwasuka iyo inodimbura mufananidzo kuita zvikamu zviviri zvakaenzana, izvo zvinogona kunyatsoiswa pamusoro.
Iyo equilateral katatu inobvuma matemo matatu e symmetry, isina-equilateral isosceles triangle inobvuma chete imwechete axis yemetetry: iyo kureba zvine chekuita nechigadziko; isosceles trapezoid inobvuma chete imwe axis yekuenzanisa, inova iyo axis yezvigadziko zvayo.
Nenzira iyi mukuita tinotsvaga zvidimbu zvehurongwa mumhirizhonga inogadzirwa netsaona.
Sezvatichaona munguva pfupi, mhando nhatu chete dzemifananidzo dzinogona kuve dzakaumbwa mumagirafu: mativi matatu, matrapezoid uye, kazhinji, zvikamu uye zvikamu zvakaputswa zvemhando dzakasiyana uye hurefu.
Saka mhando ye symmetry iyo inotifadza ndiyo chete yekutanga, ndiyo axial symmetry.
Heano mamwe magirafu ezvechokwadi marekodhi kuti unzwisise zvirinani zvatiri kutaura nezvazvo:
Mune graphic mune humbowo, ini ndadhirowa netambo yegirini mamwe maekisero e symmetry (muchokwadi kune mamwewo) eiyo geometric manhamba akaumbwa, ngatinyorwe iwo:
isosceles trapezoid ine diki base kumusoro;
nhamba / mutsara wemapoinzi matatu;
isosceles Triangle ine vertex kumusoro;
nhamba yemapoinzi mana (inoita kunge zeta yakatsvedza).
Naizvozvo, kana ndichida kunangana nekuvharwa kwechimiro chakaenzana, ndinenge ndatamba:
Mufananidzo 1: chinhambwe -2 mushure mekubuda kwetatu kwemapoinzi mana anoumba, kureva -2 +2 +2;
Mufananidzo 2: iyo nhambwe +2 mushure mekubuda kwematanho +2 +2;
Mufananidzo 3: iyo nhambwe -3 mushure mekubuda kwenzvimbo -3-1;
Mufananidzo 4: iyo nhambwe -2 mushure mekubuda kwematanho -2 +2;
Mufananidzo 5: iyo nhambwe -2 mushure mekubuda kwenzvimbo nhatu - -2 -3;
Sezvauri kuona, girafu iri rizere neyakaenzana manhamba uye ini handina kuratidza nemaune iyo isosceles Triangle ine vertex pasi inowanikwa pakarepo mushure meiyo trapezium uye chikamu chemapoinzi matatu kusimuka nekukurumidza mushure memufananidzo 3.
Ese manhamba akanyorwa (kunze kwenhamba yechishanu) ndiwo akajairika uye unozodziwana mune angangoita ese magirafu.
Ngatitarisei zvino mamwe mamowiri akaomarara
Mumufananidzo wakatenderedzwa nenhamba 1, mutsetse kubva kure kure - 2 unokwira nenzvimbo mbiri kusvika chinhambwe +1, wobva wadzika kuenda kure -1 uye unokwira kumusoro chaiko nzvimbo mbiri kusvika kure +2.
Mune ino kesi, mushure mematanho -2 ne +1 emapoinzi maviri ekutanga, chiumbwa chinowirirana chine poindi +2.
Ramba uchifunga kuti kubva pachinhambwe - 2 kusvika kure 1 pane zvinzvimbo zviviri chete kunyangwe zvikaenderana nezvikwere zvitatu mugirafu, nekuti zero zero inogara isina basa, izvi zvinokanganisa girafu zvishoma, asi zvakaringana nzwisisa kuverenga.
Mumufananidzo wechipiri zviri nyore kunzwisisa kuti iyo symmetry inoumbwa pachinhanho chechina nekudzokororwa kwedaro +2.
Mufananidzo wechitatu, kune rimwe divi, une maitiro ekuumbwa: anotanga kubva chinhambwe +1 uye anodzika pasi chinzvimbo chimwe kuenda kuchinhambwe -1 (rangarira zvakangotaurwa kune zero mutsetse), wozodzokera kumashure kusvika kure +3 uye yobva yadzika zvakare neumwe. chinzvimbo kumusoro kusvika chinhambwe +2.
Chenjera: iyi nzira yekutamba haifanire kushandiswa neiyo online roulette inotarisirwa nesoftware, nUsatomboedza kuzvishandisa kupokana nesoftware, senge nenzira dzese pasi pano, kupokana nesoftware kuzvidzivirira chete hakusi kutamba kana kuve maneja wekasino.
Panzvimbo iyoyo, ishandise pane epamoyo online roulettes, uko chaiko croupier inokanda bhora, uchingochenjerera kunzvenga iwo ma roulettes anoshandiswa chaizvo bhora rakareruka, iro rakambodonha pakati pemabhokisi akasiyana siyana, hops zvisizvo usati wapedza waro.
Kana iwe uchifunga kuti macro maitiro hazviwanzo kuitika, heino mimwe mimwe mienzaniso yezvikamu zvehupenyu.
Zvakanaka, ini handidi kuenda kumberi uye ndinovimba ndanga ndakanyatso nzvera pane kugona kweiyi nyowani yekuona nzira kune mutambo weiyo roulette.
Ini zviri pachena ndinokurudzira kungwarira kukuru uye pamusoro pezvose ini ndinokukoka iwe, usati watanga kubheja zvakakomba, kuti urovedze iwe kuti udzidze nekukurumidza kuziva iwo madiki uye macro maitiro ayo ega ega croupier anogadzira panguva yake yekukanda.
Izvo zvese ndezve izvozvi, kune chero rutsigiro rwunoda sezvo iwe uchiziva kuti ini ndinogara ndinako kuburikidza ne ►fomu rekutaurirana.
File Download	DSTracker.zip - 4 MB
Download 4959 Downloads